SomaliTalk.com » 2014 » December » 25
Home » Archive Maalinta December 25th, 2014
Warsaxaafadeed Muqdisho, December 25, 2014—— Munaasabad ballaaran oo ka dhacday xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa waxaa si rasmi ah xilka ula wareegay Ra’iisul Wasaaraha cusub mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke, waxaana munaasabadan goob joog ka ahaa Ra’iisul Wasaaraha xilka wareejinayay Mudane Cabdiwali Sheekh Axmed Maxamed iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya...
MINNEAPOLIS: DIB-U-FURIDDA ICSA/ MASJIDKA DAAR AL – HIJRA!
Natiijo wanaagsan aan u badelno dhibkii inaga soo gaarey dabkii Cedar ka dhacay. Masjidka dib u dhiskiisii wuu bilaabmay. Ka qeyb qaado dib u dhiskiisa. Waxaana lagula wadaagi doonaa macluumaad ku saabsan Masjidka dib u furiddiisa. Dadka lagu martiqaadey waxaa ka mid ah: Imaamyada Masaajidda Madaxda bulshada Mas’uuliinta la doortey Waxaa Kalimado ka jeedin doona: Sh. Cabdiraxmaan Shariif Sh. Axmed...
Wargeyska SOMALIPRESS oo muddo 17 Sanno ah ka soo baxayey Dalka Canada oo Markii ugu horeysey laga soo saarey Muqdisho.
Wargeyska SOMALIPRESS oo muddo 17 Sanno ah ka soo baxayey Dalka Canada ayaa Cadadkii ugu horeeyey waxaa laga soo saarey Magaalada Muqdisho , waxaana Daahfurkii Wargeyskaas loo sameeyey Xaflad si heer loo soo agaasimey oo ay ka qayb galeen Qaybaha ka duwan Warbaahinta,Ganacsato,Shirkadaha gaarka loo leeyahay, Xawaaladaha, Kuwa Isgaariisnta,Jaamacadaha,Waxgarad,Aqoonyahano iyo Marti Sharaf kale. Ugu...
Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga Amb. Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan ayaa waxa uu magaalada Ankara kula kulmay shaqaale ka mid ah Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo dhiiragalinta maalgashika Soomaaliya oo tababar la xariira isku xirka Safaaradaha Soomaaliya ee ku yaala caalamka ee dhanka Tiknoolajiyadda u yimid Turkiga . Riix sawirka si aad u aragtid sawirka oo weyn Shaqaalahaan oo tiradooda...